Iindaba -Zithini iiglavu zentsimbi ezitywinwe ngentsimbi ezahlulwe zangokwefom yejelo lomjelo?
Zithini iiglavu zentsimbi ezitywinwe ngentsimbi ezahlulwe zangokwefom yejelo lomjelo?
Isinyithi yeglobhu evaliweyo yentsimbi
1. Nkqo ngevalufa iglobhu
"Ukuthi ngqo" kwivelufa yeglobhu ethe tye kungenxa yokuba isiphelo sayo sokudibanisa sikwi-axis, kodwa ijelo layo elinamanzi alikho "ngokuthe ngqo", kodwa endaweni yoko linobundlongondlongo. Ukuhamba kufuneka kujike i-90 ° ukudlula esihlalweni kwaye emva koko ubuye umva ngama-90 ° ukubuyela kwicala langaphambili. Kwiivelufa ezilahliweyo, imilo yesitishi kunye nendawo iyahluka ngokuxhomekeka kubungakanani bevelufa kunye nenqanaba loxinzelelo.
Ulwakhiwo lwesitishi se-Z sevalve esikiweyo, okanye umzimba womzimba osisinyanzelo osimahla uya kuthi ungenise ngaphakathi kwaye uthumele ngaphandle izibuko kunye nomgca osembindini wombhobho uye kwi-Angle ethile, eyile fomu ifom Z yokuhamba, kwaye ihlala ilungiswa ukunciphisa, nangona icuthene umgodi kunye nokuhamba okungxolayo kuyonyusa kakhulu ukulahleka koxinzelelo kulwelo, ukongeza kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ukuguqula iAngle ebukhali kwimeko yokusebenza kwento ene-cavitation fluid.
2.Ivalile yeglobhu yevali
Khuphela emva kwimbali yophuhliso lwevalvu yeglobhu, uphuhliso lokuqala yi-Angle globe valve, emva koko ngokuthe ngcembe iphuculwe yaba yivelufa ethe ngqo. Nangona iiglavu zeglobhu ezithe nkqo zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo namhlanje, iigloves ze-Angle globe zisenezibonelelo ezizodwa.
Iiglavu ze-Angle globe zivumela ukuhamba ukuba kutshintshe izikhombisi ezingama-90 kwaye kuhlala kungena ukusuka emazantsi esihlalo. Imbaleki ivuleke ngakumbi kwaye ayinaxhala ngakumbi kunendlela ethe ngqo, ngenxa yoko kuncipha ukuphulukana noxinzelelo. Iiglavu ze-Angle globe azonakaliseki ngokulula ngamasuntswana aqinileyo. Idiski inokuyilwa ngozipho okanye imilo yesiketi kummiselo ongcono. Ngenxa yotshintsho lwendlela yokuhamba, umzimba wevalve uya kuchaphazeleka ngamandla okuphendula kulwelo. Le mikhosi ihlala incinci kodwa inokunyuka ngenxa yesayizi yevalve kunye nokuxinana kwamanzi.
I-alloy encinci ye-alloy threaded Angle glove valves isetyenziswa ngokubanzi kwiimeko zamanzi ezicocekileyo. Uninzi lwezivalo ze-Angle globe zevalve luhlobo lwebhonethi ebotshiweyo, eyenziwe ngentsimbi ebunjiweyo, ubhedu, intsimbi engenasici kunye nezinto zentsimbi eziphindiweyo.
Ubukhulu obuqhelekileyo kunye noxinzelelo lweeklasi zevalve ze-Angle globe zihlala zi-DN50 ~ 250 (NPS2 ~ 10), Class 150 ~ 800. Ngaphandle kolu luhlu, idiski elungelelanisiweyo ihlala isetyenziselwa ukunciphisa i-axial fluid thrust kwi-stem.
I-3, i-valve yokumisa ngokuthe ngqo
Iglavu yeglobhu ethe tye iyaziwa njenge-valve yeglobhu emile njenge-Y okanye i-oblique globe valve, inokuba yinto ethe nkqo kunye nevalve yeAngle embindini wombuso. Ukulungiselela ukutshintsha ijelo eligqibeleleyo lokuhamba ulwelo, umngxuma wesihlalo wevalve kunye noyilo lomzimba wevalve kwiAngle ethile, ukuze ijelo lokuhamba liqonde ngakumbi nge-axis, ukwenzela ukunciphisa ilahleko yoxinzelelo, ke ibizwa ngokuba " ukuhamba ngqo ”. Esi sakhiwo siyathandwa kuninzi lwezicelo kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo zomphunga. Umthamo wothutho oluqinileyo uphuculwe kakhulu, kodwa ukuvavanywa ngononophelo kuyafuneka ekusebenziseni. Iiglavu zeglobe zokuhamba ngokuthe tye nazo zinendlela enye yokuhamba. Imbaleki inobubanzi obupheleleyo kunye nobubanzi obuncitshisiweyo. Ayizilungelanga ihagu ngaphandle kokususa ibhonethi.
Idiski ihlala iflethi, ikhokelwa ngozipho okanye iteyiphu ukuhlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokusebenza. Iprofayile yediski enamacwecwe inokuyilwa ngeetape ezininzi ukuvelisa ukubamba okuphambili nasesekondari. Idiski ephathekayo kunye ne-claw guide disc valves inokufakelwa ukosula ukucoca isihlalo ngaphambi kokutywinwa, okanye itywina leerabha lingafakwa esihlalweni ukuphucula ukutywina kwevalve.
Iiglavu zeglobe zokuhamba ngokuthe tye zihlala ziphoswa kunye noxinzelelo oluphezulu lwevalvu ezakhiweyo. Ngokweemeko ezahlukeneyo zomsebenzi, izinto ezikhethekileyo ezinjengezigaba zesinyithi ezingenasici ezingenasiphelo zinokukhethwa kwimveliso.
4. Ivaluva yeendlela ezintathu
Iindlela ezintathu zeglobhu ezisetyenziswa rhoqo njengezivalo zendlela kwiinkqubo zoxinzelelo oluphezulu. Umzekelo, iqondo lobushushu eliphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lokuhambisa amanzi kweebheyile zesikhululo samandla. Ukuhamba ngesiqhelo kuhlala kusetyenziswa ukuqala, ukuvala okanye ukusilela.
Enye imeko yokusebenza eqhelekileyo njengevalvu yokuguqula yinkqubo yokunceda uxinzelelo. Izivalo ezimbini zoncedo zixhonywe kwiveluvu yendlela enye yeendlela ezintathu, ivumela enye ivalve ukuba isebenze ngokwesiqhelo xa enye yazo ifuna ukubekwa yodwa okanye inkonzo. Ngenxa yesakhiwo sangaphakathi, i-valve ye-glove yendlela ezintathu inokumelana nokuhamba okuphezulu. Utshintsho kwicala lolwelo luza kuvelisa amandla amakhulu okuphendula kwibala elikhulu leendlela ezintathu zevalvu.
Umzimba weevalve zendlela yeglobhu ihlala iphosa intsimbi okanye intsimbi yentsimbi. Iivalve ezisetyenziswa kwizityalo ezinamandla zenziwe nge-butt-welding ukoyisa iingxaki zokuvuza ezibangelwa kukudityaniswa kwe-flanged.